DAAWO Sawirro iyo Video kuwi uu gacantiisa ku sameeyey ayaa gacantooda ku dilay Cali Cabdalla Saalax. – Xeernews24
DAAWO Sawirro iyo Video kuwi uu gacantiisa ku sameeyey ayaa gacantooda ku dilay Cali Cabdalla Saalax.
5. Dezember 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax ayaa lagu dilay magaalada Sanca, sida lagu sheegay raadiyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Xuthiyiinta.
Telefishin ay Xuutiyiinta maamulaan oo lagu magacaabo Al-Masirah ayaa baahiyay muuqaalka nin wasiirka arrimaha gudaha lagu sheegay oo shaacinaya in la soo afjaray dhibaatada maleeshiyada khiyaanada qaran sameysay, lana dilay hoggaamiyahooda”.
Muuqaal u eg maydka Saleh, oo lagu soo bandhigay warbaahinta bulshada ayaa muujinaya sida maleeyshiyaad hubaysan ay u isticmaaleen buste inay ku duubaan maydka si ay u saaraan gadaasha gaadhi xamuul ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/12/Cali-Cabdala-Saalax-2.jpg 558 900 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-12-05 01:36:052017-12-05 01:36:05DAAWO Sawirro iyo Video kuwi uu gacantiisa ku sameeyey ayaa gacantooda ku dilay Cali Cabdalla Saalax.
Odhaahda Maanta Jinsi waa ma Guuraan!
Cali Cabdalla Saalax iyo Xuutiyiinta oo xulufaddi sacuudigu Hoggaaminaayey u... DAAWO(waayo-waayo). Xulkii Qarankii Soomaalia ee kubada Cagta oo ka badiyey...